Dowladda Somaliya ayaa ku baaqday in si deg deg ah loo joojiyo dagaalka dhiigga ku daatay ee ka dhacay deegaanka Dhumay oo ka tirsan goboolka Sool, kadib war qoraal ah oo ay soo saartay. Halkan hoose ka akhriso qoraalka ka soo baxay dowladda Somaliya:- War-saxaafadeed ka soo...
’Raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya (XFS), mudane Xasan Cali Khayre, oo maanta saraakiisha ciidanka xoogga dalka kula hadlay xarunta wasaaradda difaaca dalka iyo taliska ciidanka xoogga, ayaa amar ku bixiyay in la dardar geliyo qorshaha dib-u-dhiska ciidanka iyo...
Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegtay in duqayn Maraykanku ka gaystay bartahama Soomaaliya lagu dilay ku dhowaad 60 ka tirsan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Duqayntan ayaa 12-kii bishan waxay ka dhacday degaan ilaa 20-KM u jira magaalada Xarardheere ee Gobolka...
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha shacabka ee maanta ka qayb gelaayay kulanka 14-aad ee Golaha Shacabka ayaa waxaa ay sheegeen in ay maanta handaad iyo rasaas kala kulmeen ciidanka ammaanka ee ay maanta u xiran yihiin inta badan Waddooyinka Muqdisho. Xildhibaannada maanta...
Wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ayaa saaka xiran, iyadoo gaadiidka ay saaran yihiin dadka shacabka ah aysan isaga kala gudbi karin isgoysyada magaalada gudaheeda qaarkood. Isgoyska Banaadir, Zoobe, Taleex, KM4, Shaqaalaha iyo kuwa kale ayaa xiran, ciidanka dowladda ayaana...
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi (Indha qarshe) ayaa wuxuu sheegay hawlgal ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe inay ku bur buriyeen dooman ay isticmaalayeen Ururka Al Shabaab. Wuxuu sheegay Shabaab inay mar walba isku...
Magaalada Muqdisho waxaa soo gaaray wafuud ka kala socotay dalalka Itoobiya Iyo Eritrea, kadib markii casuumaad ay ka heleen madaxda dowladda Federalka Somaliya. Ammaanka Muqdisho ayaa si wayn loo adkeeyay, iyadoo wafuudaan loo xiray Magaalada gudaheeda si loo soo dhexmarsiiyo...
Muktaar Robow Abuu Mansuur aya raja xua kadoo food sarat Maadame ay aheyd inuu u tartamo doorashada Koofur Galbeed. Rooboow, ayaa Baydhabo uga dhawaaqay todobaadkii hore inuu yahay musharax u taagan xilka Madaxweynaha Koofur Galbeed, Doorashada waxey dhaceysaa 17-ka bisha danbe...